Mohamed Dhaysane | warsanradio baydhabo
Dhageyso+Sawiro:-Jemis iswem wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arimaha...
Dhageyso+Sawiro:-Madasha awoodaynta dhalinyarada oo ay soo qaban qaabisay...
UNSOM Press Statement:-UN envoy to Somalia highlights importance...
Akhriso:-shuruudaha laga rabo Musharaxiinta Jubbaland oo Guddiga Doorashada...
In visit to Hirshabelle, UN envoy to Somalia...
Home AuthorsAll posts by Mohamed Dhaysane
Wararka DibaddaWARARKII MAANTA
Weerar lagu dilay 30 oo ka dhacay dalka Nigeria
written by Mohamed Dhaysane
Malleeshiyaad ka tirsan Kooxda Boko Haram, ee ka dagaalanta dalka Nigeria, ayaa lagu soo waramayaa in ay weerar Ku dileen 30 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Nigeria.
Ilo wareedyo warbaahinta Caallamiga ah ka heshay Maliteriga dalkaasi ayaa xaqiijiyay weerarka iyo dilka askarta 30 ka ah.
Wakaaladda wararka Reuters, ayaa Ku warantay in weerarka malleeshiyaadka Kooxda Boko Haram ay Ku qaadeen xarun ciidamada Maliteriga ay Ku leeyihiin deegaanka Zari, oo ka tirsan gobalka Borno ee dalka Nigeria, kaasi oo sanadihii la soo dhaafay ay ka jireen dagaallo xoogan oo dowladda iyo Boko Haram.
Kooxdan ayaa dowladdu waxaa ay sheegtay in awooddooda qaab istaraatiiji ahaan iyo Maliteri ahaan loo wiiqay, hase ahaatee waxaa muuqata in kooxdu wali tahay mid abaabulan oo fulin karta noocyada kala duwan ee weerarada argagaxisanimada ah.
QM iyo hay’adaha udooda xuquuqda Aadanaha ayaa Ku waramay in gobalada qaar ee dalka Nigeria ay ka dhaceen xad-gudubyo ka dhan ah Aadanaha.
Kooxda Boko Haram, ayaa 10-kii sano aan soo dhaafnay waxaa la sheegay in ay dileen dad ka badan 10,000 (Toban Kun) oo qof ayagoo afduubyo wadar ah oo gabdhaha iskuulida dhigta kula kacay halka ay barakaciyeen dad faro-badan.
Weerar lagu dilay 30 oo ka dhacay dalka Nigeria was last modified: September 1st, 2018 by Mohamed Dhaysane
01/09/2018 0 comment
Wararka DibaddaWARARKA MAANTA
Maraykanka oo dhaqaalihii ka jaray Hay’adda UNRWA ee reer Falastiin
Dowladda Mareykanka ayaa joojisay dhammaan dhaqaalihii uu siin jiray hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan qaxootiga Falastiyiniinta sidda ay sheegeen qaar ka mid ah Hay’addaha Gargaarka.
Heather Nauert oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Trump uu qiimeyn ku sameeyay hay’addani isla markaana uu go’aansaday in lacag dheeraad ah aan loogu yaboohin mar dambe.
Warbixin qoraal ah oo ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu gebi ahaanaba hakiyay lacagaha uu ugu deeqo hay’addaasi Qaramada Midoobey ee qaxootiga Falastiyiniinta ee UNRWA.
Hay’adda UNRWA ayaa hadda taageerta in kabadan shan milyan oo qof oo ku nool guud ahaan gobolka bariga dhexe, waxa ayna gacan ka geysataa caafimaadka, waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada.
Mareykanka ayaa boqolkiiba soddon bixiya kharashka hay’addani ay ku hawlgasho, waxaana sanadkii 2016 uu siiyay kharash gaaraya 368 milyan oo doolar.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa sheegay in dalkiisu uu kordhin doono lacagaha deeqda ahi ee uu siiyo hay’addani maadaama ay dhaqaale xumo soo wajaheyso.
Maraykanka oo dhaqaalihii ka jaray Hay’adda UNRWA ee reer Falastiin was last modified: September 1st, 2018 by Mohamed Dhaysane
Taliye ku xigeenka NISA oo shaqada laga eryay
Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka qaranka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in gabi ahaanba hey`adda laga saaray taliye kuxigeenkii hore Cabdalla Cabdalla oo horay xilka looga qaaday.
Warkaan la soo dhigay barta twitterka ee Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda ayaa lagu sheegay in markii ay fariisteen guddi loo saaray arrinta Cabdalla Cabdalla ay go`aamiyeen in uusan ka sii mid ahaan karin hey`adda oo aan lagu aamini karin shaqo qaran oo xasaasi ah.
Kadib waraysi uu bixiyay Gen. Abdalla Abdalla kuna sheegay eedeymo, waxaa loo saaray guddi baara qaladaadka xasaasiga ah ee ka horimaanaya hanaanka shaqo & danaha qaran, wuxuu gudigu gartay, inuusan u qalmin kasii mid ahaanshaha NISA laguna aamini karin shaqo qaran oo xasaasi ah.
— NISA (@HSNQ_NISA) September 1, 2018
Ka saaridda Cabdalla Cabdalla ayaa waxaa sababay kaddib markii uu wareeysi uu aad ugu dhaliilay hoggaanka NISA siiyay idaacadda VOA laanta Afka Soomaaliga ah.
Cabdalla Cabdalla ayaa ahaa taliye kuxigeenkii labaad ee NISA muddo lix sanno ah, waxaana dhawaan shaqo joojin ku sameeyay taliayha hey`adda,iyada oo markii danbena xilki laga qaaday.
Taliyaha laga saaray NISA ayaan wali ka falcelin warka soo baxay ee looga saaray hey`adda sirodonka iyo nabadsugidda oo uu muddo ka mid ahaa taliyaasha ugu sarreeya.
Taliye ku xigeenka NISA oo shaqada laga eryay was last modified: September 1st, 2018 by Mohamed Dhaysane
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa kulan la yeeshay Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame, waxaana ay ka wada hadleen Arrimaha gobolka.
Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa Abiy Ahmed ku ammaanay dadaalka uu dalkiisa ku horumarinaayo iyo Isbedallada cusub ee Itoobiya ay wajahday.
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay ballaarin doonto iskaashiga ay la leedahay dalalka Afrika, gaar ahaan Rwanda.
Labadda Hoggaamiye ayaa ku kulmay dalka Shiinaha, halkaasi oo uu ka socda Shirka Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo Shiinaha kula kulmay madaxwaynaha Rwanda was last modified: September 1st, 2018 by Mohamed Dhaysane
Wararka DibaddaWARARKA MAANTAWARARKII MAANTA
Daraasiin Jawaasiis ah oo lagu xiray dalka Iiraan
Wasiirka wasaaradda sirdoonka Iiraan Maxamuud Calawi ayaa sheegay in ay xireen darsan jawaasiis ah . Qabashada basaasiinta ayaa qayb ka ah olole ka dhan basaasnimada iyo heysoshada dhalashada waddan kale, iyada oo qofku uu xil sare ka hayo dalka Iiraan.
Wasiirka ayaa waxa kale oo uu si aan toos aheyn u sheegay in Iiraan ay basaas ku dhex darsatay dawladda Israiil.Wakaaladda wararka tasniim ayaa sheegtay in wasiirka uu ula jeeday basaaska ay dawladd sirdoon xoogan leh ku dhex darsadeen Gonen Segev wasiirkii hore ee tamarta Israaiil , kaas oo maxkamad ku taal Quddus ay ku heshay eedo la xiriira basaasnimo.
Wareysi wasiirka lala yeeshay galinkii danbe ee talaadada ayuusan marnaba daaha ka qaadin tirada basaasiinta iyo goorta la xiray.
“Cadawgeennu waxay lacag ku bixinayan si ay u helaan xogta waddankeena, laakiin wasaaradeyda qaybta ka hortaga jaajuusiinta aad ayay u xooggantahay”
Wasiirka wasaaradda sirdoonka ayaa soo bandhigay qorshoyaal lagu doonayo in jagooyinka sar sare looga qaado dadka Iiraaniyiinta ah ee heysta dhalashada waddamada kale.
Daraasiin Jawaasiis ah oo lagu xiray dalka Iiraan was last modified: August 29th, 2018 by Mohamed Dhaysane
WARARKA MAANTAWARARKII MAANTA
Ciraaq: 8 qof oo ku dhintay Qarax ka dhacay Gobalka Canbaar
Wararka laga helayo dalka Ciraaq ayaa waxaa ay sheegayaan in maanta oo Arbaco dalkaasi ay ka dhaceen weeraro Is-miidaamin ah, kuwaasi oo gaystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Saraakiisha Hay’adaha Ammaanka dalka Ciraaq ayaa waxaa ay Ku warameen in ugu yaraan 8 qof ay Ku dhinteen halka in ka badan 12 kalena ay Ku dhaacmeen weerar is-miidaamin ah oo ka dhacay Degmada Qaim oo ka tirsan gobalka ay Suniyiintu ay Ku badan yihiin ee dalka Ciraaq.
Weerarka oo ahaa mid Ismiidaamin ahaa ayaa waxaa lagu waramayaa in lala beegsaday bar-Kontorool oo ciidamada ammaanku ay gawaarida Ku baaraan.
Wakaalladda wararka Reuters news agency, ayaa waxaa ay sheegaysaa in barta la weeraray ay Ku badnaayeen malleeshiyaad Shiico ah oo dowladda ka amar-qaata.
Ciraaq: 8 qof oo ku dhintay Qarax ka dhacay Gobalka Canbaar was last modified: August 29th, 2018 by Mohamed Dhaysane
Amarro adag oo lagu soo rogay Hay’adaha Caallamiga ah ee Soomaaliya
Wasaaradda Qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa maanta soo qaban-qaabisay shir ay ka soo qeyb-galeen hey’adaha caalamiga ah iyo NOGS-ka, kaas oo xoogga lagu saarey sidii hey’adaha caalamiga ah ay uga howl-geli lahaayeen gudaha Soomaaliya.
Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo ka hadlayey ujeedka waxaa uu sheegay “Ujeedka waxaa uu ahaa in aan u sheegno hey’adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya mashaariicda Soomaaliya inay Soomaaliaya joogaan, waddanka degan yihiin, shaqaale Soomaaliyeed qortaan, canshuur bixiyaan, xarumahooda waddanka ahaado, waqtigii Nairibi la joogi jiray, oo Soomaaliya loo iman jiray shaqo maalin ah, ama 2 maalin ah waa dhammaatay, waxaan siinnay ilaa sanadkan inta hartay ku soo guuraan dhammaantood, hey’addii Janauary 1-keeda bannaanka joogta, oo xafiisyadeeda waddan kale ku yaalliin, dowldda Soomaaliya lama shaqeyn-doonto”.
Dhinaca kale, Wasiirka Qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan waxaa uu sidoo kale sheegay in hey’adaha ku war-geliyeen inay hey’adaha la socod-siiyaan shaqada ay qabanayaan dowladda Soomaaliya, oo aan NGO la shaqeyn, oo ay la shaqeeyaan hey’adaha kala duwan ee dowladda, wasaarahada, dowlad goboleedyda, ilaa heer degmo, heer tuulo.
Amarro adag oo lagu soo rogay Hay’adaha Caallamiga ah ee Soomaaliya was last modified: August 29th, 2018 by Mohamed Dhaysane
Madaxwayne Farmaajo oo shir uga qab galaya Shiinaha (Sawiro)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u amba-baxay dalka Shiinaha oo ay kaga qayb galayaan Shirka Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee (FOCAC).
Madaxweyne Farmaajo ayaa furitaanka Madasha ka hor waxa uu kulan gaar ah la yeelan doonaa dhiggiisa dalka Shiinaha Mudane Xi Jinping.
Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadli doona dardar-gelinta xiriirka taariikhiga ah ee Shiinaha iyo Soomaaliya, kaas oo ku saleysan iskaashi iyo wax wada qabsi, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, diblumaasiyadda iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in ka qayb galka DFS ee shirkan uu muhiimad u leeyahay fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee ka jira dalkeenna.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay kala arrinsan doontaa Shiinaha sidii ay qayb muhiim ah uga qaadan lahayd maalgashiga dalka iyo soo celinta kaalinta soo jireenka ah ee ay ku lahaayeen dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha.”
Wafdiga Dowladda Federaalka Soomaaliya ee uu hoggaminayo Madaxweynuhu ayaa inta ay ku sugan yihiin dalka Shiinaha waxa ay wadatashi iyo wadahadallo la qaadanayaan dhiggooda ka socda dalalka ka soo qayb galaya Shirka Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika.
Madaxwayne Farmaajo oo shir uga qab galaya Shiinaha (Sawiro) was last modified: August 29th, 2018 by Mohamed Dhaysane